Fanohanana ny marary - Fitsaboana fitsaboana Proton - Proton Kalifornia
Ny serivisy fanohanana momba ny homamiadana Proton Therapy
Manohana ireo marary homamiadana isaky ny dingana
Ny fitiliana ny homamiadana dia miova. Miaraka amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana faran'izay be dia be sy ekipa fikarakarana marary efa voatokana, ny fampahafantarana dia manampy amin'ny marary marobe sy hanala ny tsy fahatokisana manodidina ny fitsaboana. Manome fanampiana ny marary homamiadana mandritra ny dingana fitsaboana izahay. Namboarinay ny fizotran'ny fitsaboana 8-dingana fampihenana ny dianay mandroso amin'ny antsipirihany hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany ka hahatsiaro tena tsara sy matoky ny fitsaboana ny marary sy ny fianakaviana. Ny marary marobe koa dia mahita fa mampahery ny mifandray amin'ny hafa izay afaka miara-miory amin'ny fahaterena efa misy ary koa ny fanambin'ny fikarohana fikarohana safidy. Ny serivisy faharetantsika sy ny serivisy, anisan'izany ny Fandaharana ifandraisana ao California, fanohanana ara-tsakafo, sosialy isan-kerinandro, ary fitsidihan'ny alika fitsaboana hamafisina bebe kokoa ireo fifandraisana ireo rehefa manampy amin'ny fampivondronana ny fiarahamonina ary mamorona fahatsapana ao an-trano.
Ny dingana 8-dingana Proton Therapy fitsaboana fitsaboana
Inquial Inquiry. Ny iray amin'ireo mpandrindra klinika mpitsabo anay dia hifandray aminao rehefa avy nahazo ny fampahalalana momba anao ara-pitsaboana, anisan'izany ny fitsirihana sy ny tantaram-pahasalamanao, mba hanaiky ny fitsaboana ary hamorona rakitra ara-pitsaboana ofisialy.
Fiara-piantohana. Ny iray amin'ireo solontenanay dia hanangona ny fampahalalana ilaina mba hangataka alalana amin'ny fiantohana amin'ny fitsaboana. Hamantatra bebe kokoa momba ny vidin'ny Proton Therapy sy ny fandrakofana.
Dokotera ara-pitsaboana. Mandritra io fanendrena io dia hamerina sy hanazava ny fomba itondranao azy ny oncologist anao.
Fanendrena CT Simulation (ST-SIM). Handeha "famerenan'ny akanjo" ianao amin'ny alàlan'ny fakana sary sy fanamboarana ny famonoana (CT) namboarina amin'ny CT mba hanomanana anao sy hiantohana ny fampitaovana amin'ny toerana marina amin'ny alàlan'ny fitandremana tsara amin'ny fitsaboana. Mety ho namboarina miaraka amin'ny volon-doko na saron-tava manokana ianao, na mandray marika vatana maharitra (teboka kely) manampy hanitsiana mandritra ny fitsaboana.
Fandaminana fitsaboana. Ny onkolojinao momba ny taratrao, miara-miasa amin'ny ekipa dosimetristia sy ireo mpitsabo ara-pitsaboana, dia hamorona drafi-pitsaboana efa natao manokana, hampiasa rindrambaiko avo lenta sy teknolojia. Ny asa tsara sy amin'ny antsipiriany dia mitaky 10 na 14 andro fandraharahana, aorian'izay dia hahazo antso avy amin'ny mpitsabo aretim-potoana ianao handamina ny fitsaboanao isan'andro.
Fanamarinana ny simulasi (V-Sim). Hihaona amin'ny mpitsabo anao sy ny ekipa mpanampy amin'ny fitsaboana ianao izay hampahafantatra anao amin'ny andiam-pandaharam-potoana isan'andro ary hanamarina ny toerana misy anao sy ny sarinao. Na eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 minitra aza ny fotoana fitsaboana tena, dia afaka manantena hatramin'ny 30 minitra isaky ny fotoam-pivoriana ianao. Mandritra izany fotoana izany, mihetsika foana ny horonan-tsarimihetsika sy feo roa feno mandritra ny fitsaboana ka ahafahanao mifampiresaka mandritra ny fizotrany rehetra ianao sy ny ekipanao.
Fitsaboana isan'andro. Mitovitovy amin'ny andronao iray amin'ny V-Sim iray, ny mpitsabo anao amin'ny taratra dia hanamarina ny toerana misy anao sy ny sary alohan'ny hanombohan'ny fitsaboana anao. Ny fomba fitsaboana anao dia mety miovaova arakaraka ny karazana fivontosana, habe ary ny toerana misy anao. Na izany aza, ny ankamaroan'ny karazana kansera, ary na dia tsy mora homamiadana aza, dia afaka tsaboina amin'ny 5 ka hatramin'ny 8 herinandro.
Aorian'ny fitsaboana. Hahazo taratasy famoahana farany amin'ny marary ianao avy amin'ny mpitsabo sy ny ekipanao momba ny oncolojika, izay hiresaka momba ireo dingana voasoritra amin'ny drafi-pitsaboana feno. Raha zava-tsarotra ny fitsangatsanganana ny foibenay ho an'ny fitsidihana na ny fitiliana fanampiny toy ny asan'ny ra na ny sary dia mety hisafidy ny hiverina any amin'ny oncologist na mpitsabo ho an'ny mpitsabo voalohany anao amin'ny fanaraha-maso aorian'ny fitsaboana. Betsaka ny marary taloha sy ankehitriny dia mifandraika amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ary ny programa California Protons Connect.
Ny serivisy fanohanan'ny marary anay
Mino izahay fa maro ny lalana mankany amin'ny fanasitranana ary afaka manampy ny fahasalamana feno amin'ny fahasalamana. Ao amin'ny California Proton, ny marary dia afaka manararaotra fahazoana trano sy hetsika maro any an-toerana.
Mampifandray any California
Ny fiaraha-monina California Protons dia mivory miaraka amin'ny:
Hetsika sy hetsika manokana, ao anatin'izany ny sakafo hariva ao amin'ny trano fisakafoanana any an-toerana
Ny fandaharan'asa fandresen-dahatra ao amin'ny California Protons Champion dia misy ireo mpitsabo fitsaboana taloha sy ankehitriny izay miasa ho toy ny rafitra fanohanana
Pejy Facebook ho an'ny marary sy ny mpiasa hijanona any facebook.com/CaliforniaProtons
Raha mahaliana anao ny ho tonga Tompondaka any California Protons na hahitanao bebe kokoa momba ny California Protons Connect, azafady alefaso aminay izahay concierge@californiaiaprotons.com.
Sosialana ara-tsosialy isan-kerinandro
Nampiantranoin’Andriamatoa Harrison Miller sy ny vadiny, Andriamatoa JoAnne Miller, ny fihaonana ara-tsosialy ara-tsosialy isan-kerinandro dia forum mahafinaritra ahafahana misakafo sakafo sy resaka miaraka amin’ireo marary ankehitriny sy ny lasa teo amin’ny toerana sosialy. Ny iray amin'ireo marary voalohany tao amin'ny Centre, Andriamatoa Miller dia nahafaly azy tamin'ny valin'ny fikarakarana ny homamiadan'ny proton azy dia nanomboka nandamina ireo fihaonana ireo izy ho toy ny fomba hamerenan'ny vondron'olona proton ary hanampy ny hafa handia ny traikefa mitovy.
Ny fiaraha-mientana dia tarihan'ny marary ho an'ny marary, ary loharanom-pahalalana mahafinaritra ho an'ny fampahalalana ny zava-drehetra amin'ny zavatra hitranga amin'ny fitsaboana, ny toerana hijanonana sy fihinanana mandritra ny fitsaboana.
Zahao ny efitrano fandraisam-bahiny ho an'ny toerana sy andro ary fotoana fiantsoana na antsoy ny Foibe amin'ny 858.283.4771 raha mila fanazavana fanampiny. Ny marary rehetra sy ny marary teo aloha dia raisina.
Fitsidihan'ny alika fitsaboana ho an'ny marary fitsaboana homamiadana
Ny fitsidihana miaraka amin'ny biby fiompy voamarina dia afaka manampy amin'ny marary sy ny fianakaviany amin'ny fahazoana aina sy fanamaivanana ary fanelingelenana amin'ny fitsaboana. Naseho koa izy io mba hampihenana ny adin-tsaina, hanatsarana ny toe-po sy ny haavon'ny angovo ary hampihena ny tebiteby.
Ny Centre dia faly manolotra fitsidihan'ny alika fitsaboana roa, Howard sy Lucy.
Howard: isaky ny Alakamisy amin'ny 9:00 maraina mandritra ny 1-2 ora
Lucy: isaky ny alarobia amin'ny 9:00 maraina
Raha mahita an'i Howard na i Lucy mandalo ao afovoany ianao, manantena izahay fa haka fotoana hitenenana hoe 'hi' ianao ary hiondrika izy ireo!
Kathryn Holly Retz, Dietitian voasoratra anarana, dia mihaona amin'ireo marary rehetra isan-kerinandro mandritra ny fitsaboana azy ireo mba hanohanana ny filan'izy ireo manokana amin'ny sakafo sy ny sakafo. Ho fanampin'izany, mitazona vondrona mpamatsy sakafo mahavelona sy homamiadana amin'ny lohahevitra isan-karazany mifandraika amin'ny fahasalamana izy. Misokatra ho an'ny marary rehetra ireo vondrona mpanohana ireo, ary manome fotoana ho an'ireo mpanatrika hanitatra ny fahalalany sy hihaona amin'ny olona vaovao. Kathryn dia naka fomba mandroso ary tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny voka-dratsiny sy ny fihinanana sakafo mandritra ny taratra, fa manome ihany koa ny tolo-kevitra ho an'ny karazana homamiadana sy ny filan'ny tsirairay fahasalamana maharitra.
Ny serivisy momba ny concierge anay
Ny ekipa serivisy momba ny concierge dia natokana hanampy ny marary eo an-toerana sy ivelany dia mahatsapa bebe kokoa ao an-trano mandritra ny fijanonany ao San Diego. Na vidiny manokana amin'ny trano fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana amin'ny fitsaboana, soso-kevitra momba ny trano fisakafoanana na tendron-fitsangatsanganana, dia eto izahay hamonjy ny fotoanao ao San Diego.
Diniho ny serivisy ataontsika
Call 858.283.4771 (Alatsinainy ka hatramin'ny zoma, 8 maraina hatramin'ny 5 hariva Fotoanan'ny Pasifika) hiresaka amin'ny mpikambana iray amin'ny ekipan'ny concierge na mandefa mailaka anay a concierge@californiaiaprotons.com.
Information Visa amerikana